Alzeria : Taorian’ny Fifandonan’ireo Sinoa sy Alzeriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2009 19:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Italiano, Español, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Niteraka fifandonana teo amin'ireo mpifindra monina sy ireo teratany alzeriana ao an-drenivohitr'i Alzeria ny fidiran'ireo mpiavy sinoa. Zato teo ho eo ny fitambaran'ny teratany sy ny mpifindra monina nifanandrina tamin'izany, ary nampiasa antsy sy fonjam-by ry zareo. Nisarika resa-be mikasika ny fampiasan'ny sinoa vola ao amin'ity firenena ity izany fifandonana izany, ka tsy latsa-danja amin'ny ady hevitra ireo mpitoraka blaogy.
Hoy indrindra i Talking Under the Random Dribble, izay nilaza tamin'ny lohateniny fa mahazo mihoatra noho ny nangatahany tamin'ireo sinoa ny alzeriana.
Vaky ny ady eo amin'ny sinoa sy ny alzeriana any Alzeria … Mitaraina ireo Alzeriana fa misotro zava-pisotro misy alikaola ireo mpiavy ary tsy manaja ny finoana Silamo. (“Misotro zava-pisotro misy alikaola izy ireo, ary tsy manaja ny finoantsika. Tsy maintsy miala eto izy ireo.“) …
Fifandonana ao Chinatown, hoy i Kal ao amin'ny The Moor Next Door. Hoy indrindra izy mampahatsiaro ny tantaran'ny fifandraisana nivelatra teo amin'ireto firenana roa ireto :
Azo lazaina fa tsara ny fifandraisan'i Alzeria sy i Shina. Ny hoe “Alzeria sy Shina” dia midika hoe ny governemantan'ny Repoblika Demokratika mamim-bahoakan'i Alzeria, sy ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina, miaraka mahazo ny tombon-tsoa amin'ny fiarahana mahafinaritra. Ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina no firenena voalohany nanaiky ny fahaleovan-tenan'i Alzeria. Maromaro ihany ireo miaramila, injeniera sy ny hafa nandranto fianarana tany Shina. Nandefa ireo “fihetseham-bahoaka” tany Alzeria ireo fahitalavitra sinoa taloha. Maro tamin'ireo kominista Alzeriana no nanaraka ny foto-kevitr’ i Mao tamin'ny taona 1960-1970, ary isan'ireo manan-danja ao Alger ny masoivoho sinoa. Ny Alzeriana rehetra izay nanao fanompoam-pirenena dia efa nilanja basy vita sinoa, ary nanompo ny firenena araka ny lalana miaramila novolavolain'ny Armée populaire de libération.
Miresaka lalina kokoa ny fifandraisana amin'izao fotoana izao i Kal avy eo. Hoy indrindra izy mikasika izany :
Tsy nahafaly ny Alzeriana ny fahatongavan'ireo Sinoa maro tao Alzeria nandritra ny taona maromaro izao, indrindra ireo tonga hanangana ireo trano araka ny nampanantenain'ny filoha Bouteflika tamin'ny 1999, 2004 ary 2009. Tian'ny Alzeriana ho azy ireo asa ireo. Niantso ny orin'asa sinoa nefa izy ireo, araka ny fepetran'ny sinoa.
Hoy ihany izy :
Noho izany, izao fifandonana izao dia noho ny korontana ara-politika ao anatiny ihany ; izany hoe, ireo korontana tsy nomen'ny governamanta roa lanja tamin'ny fifandraisana taloha. Amin'izao fotoana izao dia manohitohina ny tombon-tsoan'ny Shina ireo mpikomy ao Alzeria noho ny fitondran-tenan'ireo mpikomy sinoa ; ary kotabain'ireo mponina Alzeriana ireo mponina Sinoa izay nifindra tany noho ny fifandraisana tsara taloha.
Hisy fiatraikany amin'ny fifandraisan'ny Sinoa sy ny Alzeriana ve izao fifandonana izao ? Tsy nampiova inona ao Alzeria izany, hoy ihany ny The Moor Next Door.
Mitovitovy amin'ny hoe “Manaikitra olona ny alika” ihany ny lohateny toy ny hoe “Teraka ny Korontana ao Alzeria“. Tokony hodinihina ohatra fa nisy korontana koa tao El Tarf, manaraka ny sisintanin'i Tonizia, ny andro mialohan'ny herisetra tao Bab Ezzouar ; ary naharitra herintaona mahery ny herisetra teo amin'ireo silamo Ibadite Berbers sy ireo mpiteny arabo ao Berriena, avaratry i Ghardaia. Tsy ho tanisaina ireo fandorana sy fiara sy kodiarana izay mateti-pitranga ao Alzeria. Izay no endriky i Alzeria nentin'i Bouteflika, mampiseho indrindra ny tsy fahombiazan'ny fifampifehezana sosialy sy ara-toekarena izay mijery ankapobeny fotsiny, fa tsy mitondra vahaolana mahomby amin'ny ireo olana ara-tsosialy ao Alzeria.